साँसद विकास लम्सालको वडा एक महिनादेखी अन्धकार | Sabaiko Online
Home Flash News साँसद विकास लम्सालको वडा एक महिनादेखी अन्धकार
साँसद विकास लम्सालको वडा एक महिनादेखी अन्धकार
कुश्मा, पर्वत । दशै सकिए सँगै गाउँघरमा तिहारको चहलपहल बढ्न थालेको छ । गाउँघर झिलिमिली देखिन थालेका छन् । तर, जिल्लाको सुगम मानिएको पर्वतको फलेवास नगरपालिका अर्थात पर्वत क्षेत्र नं. २ का साँसद विकास लम्सालको जन्मस्थान रहेको साविक खानीगाउँ गाविस एक महिनादेखी अन्धकार रहेको छ ।
गाउँमा रहेको ५० के.वि.ए को ट्रान्सफर्मर बिग्रिएपछि साविक खानीगाउँ गाविसका ३,४,५,६ र ९ नम्वर वडाका स्थानियवासीहरु प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन् । ट्रान्सर्फमर विग्रिएको कारण झण्डै ४ सय भन्दा बढि उपभोक्ता अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् ।
अन्धकारमा दशै मनाएका खानीगाउँवासीहरुले तिहार पनि अन्धकारमा मनाउन पर्छ कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ । विद्युत नभएपछि स्थानियले खाना पकाउन, मोवाईल चार्ज गर्न, टेलिभिजन हेर्न पाएका छैनन् भने एक महिना देखी कुटानी पिसानी कार्यमा समस्या भएको स्थानिय तारा तिवारीले बताउनु भयो । ‘हामी एक महिनादेखी अन्धकारमा छौ’, तिवारीले गुनासो गर्नुभयो । ‘अहिलेसम्म कतैबाट विद्युत सुचार गर्न पहल भएको देखिएन–स्थानिय युवा प्रकाश सापकोटाले भने ।
पटक–पटक विद्युत प्राधिकरण कुश्मा शाखालाई खवर गर्दा समेत वास्ता नगरेको स्थानियको गुनासो छ । ट्रान्सफर्मर विग्रिएर फेरिएको ट्रान्सर्फमर बिग्रिएपछि समस्या भएकाले विद्युत आपूर्ती बन्द भएको विद्युत प्राधिकरण कुश्माले जनाएको छ ।
‘ट्रान्सर्फमर मर्मत गरेर पठाएको ट्रान्सर्फमर बिग्रिएर विद्युत आपूर्तीमा कठिनाई उत्पन्न भएको हो । हामीले ट्रान्सफर्मर दुई पटक ल्याऔँ अझै पनि काम भएको छैन,‘विद्युत प्राधिकरण कुश्मा शाखाका प्रमुख विजयराज रेग्मीले बताउनु भयो,‘ अव बढिमा २ दिन लाग्ने उहाँको भनाई छ ।
घरको छतबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु
नेपाली काग्रेस खुर्कोटको निर्वाचन समिक्षा सम्पन्न
पर्वतका ६ पालिकाको निति तथा कार्यक्रमसहित बजेट सार्वजनिक
कुश्मा नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको सुचना
काँग्रेस पर्वतद्धारा धन्यबाद ज्ञापन
© 2019 - 2022 All Right Reserved. Sabaikoonline.com